Mareykanka oo sheegay in Duqeyntii uu ka Geystay Mudug uusan Shabaab ku dilin!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Mareykanka oo sheegay in Duqeyntii uu ka Geystay Mudug uusan Shabaab ku dilin!!
Mareykanka oo sheegay in Duqeyntii uu ka Geystay Mudug uusan Shabaab ku dilin!!
Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday duleedka Gaalkacyo 28-kii bishii September ee sanadkan aanu ahayn mid Al-Shabaab lagu beegsaday, sida ay markii hore Mareykanku ku andacoonayeen.
Mareykanka ayaa tilmaamay in Ciidan Galmudug ee deegaankaas ahaa oo aan aheyn Shabaab in weerarkaasi lagu dilay, sida ay ku warantay wakaaladda wararka Reuters.
Wasaaradda Gaashaandhiga Mareykanka ayaa horay u sheegtay in Weerarkaasi ay ku dishay 9 ka mid ah Al-shabaab,balse ay wado baaritaan ah in Ciidamada la dilay ay Galmudug yihiin iyo in kale.
Warka hadda ka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in Diyaaradaha Duqeynta Fuliyay la siiyay Xog ka qaldan oo ay siiyeen Ciidamo wax magarato Puntland ee ku sugan Garoonka Diyaaradaha Gaalkacyo waxaa UsA laga sugayaa magdhaw iyo Raaligalin in ee kabixiyaan falka guracan ay ka gaysteen Mudug.
Previous PostDaawo Sawirro: Gaalkacyo, koofur iyo waqooy oo Siyaabo kala duwan loogu soo dhaweeyay hogaamiyaasha Guuleed iyo Gaas!! Next PostMadaxweyneyaasha Maamulada Galmudug iyo Puntland oo Maanta ku Wajahan Gaalkacyo!!